यौन व्यवसायीको कमाइ कति ? « Naya Page
यौन व्यवसायीको कमाइ कति ?
उनका अनुसार यौनकर्मी महिलाले आफूले कमाएको पैसा फजुल खर्च गर्दैनन् । सौन्दर्य प्रसाधनका सामान किन्नु परे ग्राहकलाई किन्न लगाउँछन् । मीठो खान मन लागे उनीहरूलाई नै किन्न लगाउँछन् । आफूले कमाएको पैसा फजुल खर्च गर्ने एकदमै कम हुन्छन् । कसै–कसैले यही व्यवसायबाट काठमाडौंमा घर र गाडी पनि जोडेको उनी सुनाउँछिन् । बिचौलियाका कारण पहिले उनीहरूको आम्दानी कम हुन्थ्यो, अर्थात् आधा–आधा गर्नुपथ्र्यो, तर अहिले मोबाइल तथा इन्टरनेटको सहयोगले सीधै ग्राहकसम्म पहुँच पुगेको छ ।
पढेलेखेकाले त अहिले ग्राहकसँग विदेशबाट गिफ्टसमेत मगाउँछन् । धेरैजसो यौनकर्मीले आफ्ना बालबच्चा सामु आफ्नो पेसा लुकाउँछन् । उनीहरूलाई राम्रो स्कुल, कलेज पढाइरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो अनुहार उनीहरूमा देखिरहेका हुन्छन्, तर बूढेसकालमा कसैगरी त्यो कुरा छोराछोरीले थाहा पाएपछि उनीहरूले त्यो विवशता बुझ्दैनन् । सीधै हेंला गर्छन् ।
दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा सञ्जाल भएको जागृति महिला महासंघकी कार्यक्रम अधिकृत शान्ति तिवारी यौनकर्मीलाई हेर्ने समाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेकाले उनीहरूले नागरिकको हैसियतले पाउनुपर्ने शिक्षा एवं स्वास्थ्यको अधिकारबाट समेत वञ्चित भैरहेको बताइन् । तिवारी भन्छिन्– उनीहरू पनि यो देशका नागरिक हुन् । उनीहरूलाई पनि शिक्षा एवं स्वास्थ्यको अधिकार छ तर यी सबै सहजै उपलब्ध हुने अवस्था छैन । साप्ताहिकले लेखेको छ, अधिकांश यौन व्यवासायी आफ्नो पेसा परिवर्तन गर्न चाहन्छन् तर उनीहरूका सामुन्ने विकल्प पनि छैन । शान्ति भन्छिन्— सानोतिनो सिलाइ, बुनाइ, कटाइको तामिल लिएर गरिने व्यवसायबाट हातमुखसमेत जोर्न सकिँदैन, अनि उनीहरू त्यही पेसामा फर्कन बाध्य हुन्छन् ।